आजको राशिफल: वि.सं. २०७३ साल मङ्सिर १५ गते। बुधबार इश्वी सन् २०१६ नोभेम्बर ३० तारिख। – ZoomNP
आजको राशिफल: वि.सं. २०७३ साल मङ्सिर १५ गते। बुधबार इश्वी सन् २०१६ नोभेम्बर ३० तारिख। प्रकाशित मिति: बुधवार, मंसिर १५, २०७३ समय - ०:५९:५३ मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) –
भाग्यस्थानमा चन्द्रमाको प्रवेश हुँदैछ, तर पनि परिस्थिति विपक्षमा नै रहने सङ्केत देखिन्छ । कडा परिश्रम व्यर्थै खेर जान सक्छ । सामाजिक र परोपकारका मार्गमा अवरोध हुनेछ । कताकता भाग्यबलमा कमी भएको आभास गर्नु हुनेछ । बन्दव्यापार र रोजगारीको क्षेत्रमा लगनशील र सक्रिय भएमा मात्र सफलता पाउनु हुनेछ । दिउँसोबाट निराशाको अन्त्य हुनसक्छ । बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) –
मनमा उमङ्ग र उत्साह देखिने छ । तर प्रेमसम्बन्ध वा प्रणयप्रसङ्गमा असमझदारी बढ्ने छ । सरकारी जागिरेले धनार्जन गर्ने वा प्रशंसा पाउने समय त आएको छ, तर कामको चाप बढ्ने र फुर्सत नहुने लक्षण छ । बन्दव्यापारमा राम्रै प्रतिफल मिल्नेछ । साँझमा केही सकारात्मकता देखिनसक्छ, त्यसैले धैर्यता र संयमता अपनाउनु राम्रो हुन्छ । मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) –
मिष्ठान्न भोजनको अवसर आउने छ, तर आहारविहारमा विशेष सतर्क रहनु राम्रो हुन्छ । शारीरिक प्रतिस्पर्धा र तर्क, विवाद वा न्याय सम्पादनका सिलसिलामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । मानसम्मान र प्रतिष्ठाको प्राप्ति हुनसक्छ । आजको विनियोजन र लगानीले उत्तरोत्तर फाइदा हुनेछ । यात्रा लाभप्रद बन्न सक्छ । कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) –
मानसम्मानमा गिरावट आउन नदिन प्रयास हुनेछन् । ज्ञानविज्ञान वा पठनपाठनमा ध्यान केन्द्रित हुन सक्दैन । बन्दव्यापारमा ध्यान पुर्याउन नसक्दा नोक्सानीको सम्भावना पनि छ । मनोरञ्जन, खेलवाड र बेकारका कुरामा अल्मलिएर समय व्यतीत हुनेछ । प्रणय सम्बन्धमा चिसोपन देखिन्छ । सन्तति वा भाइबहिनीका समस्यामा घोरिनु पर्ने समय छ । सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) –
घरपरिवारभित्रका विविध समस्यामा रुमल्लिनु पर्ने छ । आन्तरिक सम्पत्तिको लेखाजोखा र बाँडफाडका विषयमा केन्द्रित हुने दिन छ । घरबाहिर बस्नेका लागि वा वैदेशिक क्षेत्रमा सन्तोषजनक देखिन्छ । दार्शनिक वा बौद्धिक क्षेत्रमा दिलचस्पी बढ्ने छ । ज्ञानगुन, परोपकार र वैराग्यका भावनाहरू सञ्चरण हुन्छन् । तर दिनभरि शरीरमा स्फूर्ति र उमङ्गको कमी हुनेछ । कन्या (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) –
पराक्रम र प्रसिद्धि बढाउने समय छ, त्यसैले सानातिना कुरामा अल्मलिएर समय खेर फाल्नु हुँदैन । बन्धुबान्धव, साथीभाइ र मित्रवर्गबाट उत्कृष्ट सहयोगको आशा गर्न सकिन्छ । भाइबहिनीले पनि सन्तुष्ट तुल्याउने छन् । भोजभतेर र खानपिन जस्ता सामाजिक कार्यमा सहभागी बन्नु पर्नेछ । दीर्घकालिक फाइदाका लागि गरिएको प्रयासमा सफलता मिल्नेछ । तुला (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) –
चेलीबेटी र कुटुम्बपक्षका काममा समय दिनु पर्नेछ । बन्दव्यापार राम्रो छ । आर्थिक लगानी बढाउन अनुकूल छ । नयाँ ठाउँमा निवेश र लगानीको वातावरण बन्नेछ, कारोबारमा सुधार आउने योग छ । प्रशंसकहरू बढ्ेछन् । सहयोगीहरूले काममा साथ दिनेछन् । राम्रै फाइदाको योग छ । विगतको श्रमबाट प्रशस्त धन लाभ हुनेछ । रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन् । बृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) –
नयाँ कामको लागि नयाँ अवसर आउनेछ । निर्माण तथा व्यवहारिक क्षेत्रमा मन आकर्षित हुनेछ । मन त्यसैत्यसै फुरुङ्ग हुने समय छ । दैनिक कामकाज सजिलै सम्पन्न हुनेछन् । आफन्त र मित्रहरूसँग भेटघाट र रमाइलो गरिने छ । घरपरिवारमा राम्रो छ । बन्दव्यापार र रोजगारीका क्षेत्रमा लाभ मिल्नेछ । प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ । आत्म–विश्वास बढ्नेछ । विशिष्ट व्यक्तित्वसँग भेटघाट हुनेछ । पारिवारिक जमघटमा मन रमाउनेछ । मन पर्ने वस्त्र, अलङ्कार आदि उपहार पाइने योग छ । स्वादिष्ट भोजनको आनन्द समेत पाइएला । बन्दव्यापारबाट लाभ मिल्नेछ । फुर्सद नमिले पनि राम्रो नतिजा हात पर्नेछ । धनु (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) –
राशिमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने भएकाले साँझपख उत्साह र उमङ्गमा बृद्धि हुने दिन छ । त्यसैले आज दिनभरि तपाईंले धनको कारोबारमा सतर्क रहनु बेस हुनेछ । नचाहेको क्षेत्रमा खर्चको मात्रा ह्वात्तै बढ्न सक्छ । जुवातास र सट्टाबाजीबाट जोगिनु राम्रो हुन्छ । बिक्रीबट्टा र बन्दव्यापार फाइदा छैन । परिवारका कुनै सदस्यको अस्वस्थताका कारण चिन्ता बढ्ने छ । मकर (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) –
जुनसुकै काममा साथीभाइ र इष्टमित्रको सहयोग लिएको राम्रो हुन्छ । दूरदराज वा लामो दूरीको यात्राबाट लाभ लिन सकिने छ । विवादको योग पनि छ, त्यसैले मुखलाई नियन्त्रणमा राख्नुहोला । घरायसी वातावरणमा केही समस्या देखिन सक्छन् । राती बाह्रौं भावमा चन्द्रमा जाने भएकाले अनावश्यक र नचाहेको क्षेत्रमा खर्च बढ्ने सम्भावना छ । कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) –
मातापिताको चाहना र सेवासुश्रुषाप्रति समर्पित हुने दिन हो । मातापिता र अभिभावकवर्गको स्वास्थ्यस्थितिमा देखिएको खराबीले चिन्तित तुल्याउन सक्छ । ठूलाबडाको निर्णयमा दोधारेपन देखिने छ । झिनामसिना घरायसी काममा आजको समय व्यतीत हुनेछ । पापमतितर्फ आकर्षण तथा परोपकार र धार्मिक भावनामा विकर्षण बढ्नाले कर्मनाश हुनसक्छ । मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) –
दान, पुण्यका कार्यमा आकर्षण बढ्ने छ । पर्यटकीय स्थल, तीर्थ वा मन्दिरको भ्रमण हुनसक्छ । ज्ञानगुन र बौद्धिक क्षेत्रमा गरेको प्रयास सफल हुनेछ । बन्दव्यापार फस्टाउने छ । आम्दानीमा कमी हुने छैन । सानो प्रयासले रोकिएको काम बन्नेछ । पारमार्थिक काममा खट्नु पर्ने समय छ । धार्मिक÷सामाजिक क्षेत्रमा समय दिन सकिन्छ । Loading...
वैदेशिक रोजगारमा जानेको स्वास्थ्य परिक्षण गर्न अब दुई लाख रुपैया धरौटी
काठमाडौं, वैशाख १६– सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाल...
जनयुद्ध लडेकी योद्धा उषा जीविकोपार्जनका लागि प्रचण्डलाई धिक्कार्दै म्यादी प्रहरीमा : उनि भन्छिन् गद्धारहरुका कारण हाम्रो अवस्था यस्तो भयो’
मरे सहिद हुने बाँचे संसार जित्ने’ सपना बोकेर युद्धमा लागेका तत्कालीन नेकपा(माओवादी)का पुर्व छापामार ...
चुनाव रोक्ने र हुन नदिने प्रयास विरुद्ध एमाले नेत्तृ शान्ता चौधरी र काँग्रेस नेत्तृ मनिता घिमिरेले जारी गरे यस्तो अपिल (पढनुहोस पूरा अपिल )
काठमाडौ, १६ बैशाख । सामाजिक राजनीतिक अभियन्ता शान्ता चौधरी र मनिता घिमिरेले स्थानीय चुनाव सार्ने तथा...
मिडियाले ‘हिरो’ बनाएका स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको खुल्यो यस्तो पोल: भ्रष्ट्राचारमा लिप्त गगनको बिबादस्पद निर्णयलाइ अदालतले गर्यो अबैध ठहर
१६ बैशाख आफुलाई बाहिर हिरो देखाउने तर भित्र भ्रष्टाचार लिप्त हुने स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको निर्...
छोरीलाई मेयर उम्मेदवार बनाएपछि चितवनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पार्टी प्रति आक्रोशित बने माओबादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ता, पुत्री रेणुलाइ दिए ‘शाहज्यादी’को उपमा!
चितवनबाट अरु योग्य र दक्षलाई पाखा लगाएर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै छोरी रेणु दाहाललाई मेयरमा लड...
कांग्रेसलाई उम्मेदवार छान्न सकस! भक्तपुरमामा मात्रै मेयरका लागि ४२ र उपमेयरका लागि २३ जनाको नाम सिफारिस
वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भक्तपुरको चारवटै नगरपालिकामा नेपाली काँग्रेसको तर्फबा...